विज्ञ टोलि सहित बूढानीलकण्ठ मेयर र उप-मेयर नगर अस्पतालको अनुगमनमा - Budhanilkantha News
विज्ञ टोलि सहित बूढानीलकण्ठ मेयर र उप-मेयर नगर अस्पतालको अनुगमनमा
२०७९ असार ५, आईतवार २०:१४
बूढानीलकण्ठ, असार ०५ गते ।
बूढानीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख र उप-प्रमुखले विज्ञको टोलि सहित वडा नं १० डिठ्ठा चौर स्थीत निर्माणाधिन नगर अस्तपालको अनुगमन गर्नु भएको छ ।
मेयर मिठाराम अधिकारी र उप-मेयर अनितालामा सहित स्वास्थ्य विभागका भुतपूर्व महानिर्देशक मिङ्मा शेर्पा, चिकित्सा शीक्षा आयोगका निरिक्षक डा. दिलिप शर्मा, नेपाल प्रहरी महाराजगंज अस्पतालका मेडिकल निर्देशक डा. आशा सिंह लगायत न्युरो सर्जन एवं पाटन स्वास्थ्य तथा विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रोफेसर डा. प्रकाश विष्ट, काठमाडौं मेडिकल कलेजका प्राचार्य एवं हाजोर्नी चिकित्सक डा. रमेश प्रसाद सिंहको संयुक्त टोलिले अस्पतालको निरिक्षण गर्नु भएको हो ।
नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका बासिन्दालाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन नगर अस्पताल निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो ।
सबै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुसार बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं १०, बालुवाखानि डिठ्ठा चौर स्थीत १४ रोपनि क्षेत्रफलमा अस्पतालको भौतिक संरचना निर्माण हुदैँ छ ।
अनुगमनको क्रममा अस्पतालको भौतिक पुर्वाधारको क्षमता अनुसार २४ सैयाबाट १०० शैयामा बढाउन मिल्ने गरी बनाउनुहुन स्वास्थ्य विज्ञका टोलिले सुझाव दिनु भएको थियो ।
“भवन ठुलो छ र यसको क्षमता पनि पुग्दो देखिन्छ, डा. रमेश प्रसाद सिंहले बताउँनुभयो, क्षमता अनुसार १०० वटा शैया सञ्चालन गर्न सकियो भने धेरै बिरामिहरुले सुविधा लिन पाउँछन् र यसले गर्दा अस्पतालको कार्य सम्पादन पनि सक्रिय हुँदै जान्छ” ।
त्यसैगरी नगरपालिका भौतिक पुर्वाधार महाशाखा प्रमुख सुनिल महर्जनले अस्पतालमा चाहिने रेडियोलोजि ल्याब, अपरेसन थिएटर, आक्समिक कक्ष लगायत ओ.पि.डि. कक्षका कोठाहरु देखाँउदै विज्ञहरु सँग यसको संरचनााको बारेमा सुझाब लिएका थिए ।
अपरेसन थिएटरमा चाहिने आवश्यक उपकरणहरु जडान गर्नका लागि त्यहाँको भेन्टिलेसन, लम्बाई-चौडाई मापन गर्दै न्युरो सर्जन डा.प्रकाश विष्टले थिएटरमा हुन सक्ने आवश्यक परिमार्जनका पक्षहरुका बारेमा जानकारी दिनु भएको थियो ।
त्यस्तै अस्पतालको ओ.पि.डि, आकस्मिक कक्ष लगायत रेडियोलोजि ल्याबहरुमा चाहिने अत्याधुनिक उपकरणहरुका बारेमा वृस्तृत छलफल भएको थियो ।
नगर प्रमुख मिठाराम अधिकारीले भवन निर्माणको कार्यलाई द्रुत गतिमा लानु हुन सम्बन्धित सबै निकायलाई अनुरोध गर्नु भएको छ । विज्ञको सुझाबलाई पनि ध्यानमा राखि आवश्यक परिमार्जनका कामहरु अगाडि बढाउनुहुन समेत उहाँले निर्देशन दिनु भयो ।
“निर्माणाधिन अवस्थामानै यसको स्वरुप तथा सेवा प्रवाहका भौतिक संरचनाहरु परिमार्रजन गर्दा प्रभावकारी हुने भएकोले हामिले विज्ञ सहितको टोलि बोलाएर अनुगमन गरेका हौ”,अनिता लामाले जोड्नुभयो ” हामि यस नगर अस्पताललाई देशकै नमुना अस्पताल बनाउने कोसिसमा छौँ” ।
अनुगमनमा वडा नं १० अध्यक्ष नवराज भट्टराई, वडा नं ११ अध्यक्ष राजु अधिकारी, वडा नं १२ अध्यक्ष शम्भु भट्टराई लगायत नगरपालिका प्रशासकिय अधिकृत केदार खड्का, जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख कुमार प्रसाद दहाल, भौतिक पुर्वाधार महाशाखा प्रमुख शुनिल महर्जन र निर्माण कम्पनि लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा नगर अस्पताल भवन योजना २०७७ बैशाख १६ गतेका निर्णय अनुसार प्रतिष्ठागिरि कन्स्ट्रक्सन संग असार ०७ गते संझौता भई काम सुरु भएको थियो । कोभिड-१९ महामारीका कारण केहि महिना स्थगित भएको निर्माण कार्य अहिले द्रुत गतिमा अघि बढेको छ । यसको ८० प्रतिशत काम सकिसकेको छ ।
नगर परिषदको निर्णय अनुसार योजनाको कुल लागत ९,९३,६६,४२०\_- रुपैँया रहेको छ। जस्मा स्वास्थ्य मंत्रालयको ६ करोड र बाँकि लागत नगरपालिकाले आफैँ व्यहोर्ने योजनाको निर्णयमा उल्लेख छ।
बूढानीलकण्ठ नगरपालिका स्थापना भए देखिनै यहाँ सरकारी अस्पताल नहुँदा नगरवासी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वा काठमाडौँका सरकारी अस्पताल जान बाध्य थिए। नगरवासीलाई नजिकै र सरल स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले नगरपालिकाको आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना संघिय सरकार द्वारा वडा नं ०८ मा केहि साल अघिनै सुरु भएको थियो। योजनाको काम सुरू भएता पनी उक्त स्थानको भौगोलिक संरचनामा जोखिम श्रृजना भएकोले निर्माण कार्य स्थगित भएको थियो।
नगरपालिकामा स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आए पछि उक्त योजनालाई निरन्तरता दिन नगरवासीको गुनासोहरु कार्यपालिकाको वैठकमा छलफलको विषय रहने गरेको थियो। कार्यपालिकाको छलफल अनुसार नगर भित्र अन्य स्थानहरु अनुसन्धान गर्दा वडा नं १० को डिठ्ठा चौर छनौट गरिएको थियो। जनघनत्व उच्च रहेको वडा नं ०८, ०९, १०, ११, १२ र १३ भौगोलिक रुपले केन्द्रमा पर्ने भएकोले सोहि स्थानमा अस्पताल बनाउने निर्णय भएको हो।